Semalt Expert: Inona no SEO ary Nahoana no zava-dehibe?
SEO dia fomba mahomby sy azo vidiana mba hahatongavana mpanjifa vaovao, mametraka ny tranokalanao tsara ao amin'ny valin'ny fikarohana sy ny fampitomboana ny varotrao. Ny fikarohana fikarohana na ny SEO dia midika hoe fametrahana ny tranokala sy ny lahatsoratra ho hita ao amin'ny valin'ny fikarohana. Na dia eo aza ireo paikady ara-barotra isan-karazany mba hahatongavana any amin'ny mpihaino anao, fikarohana famerenam-bidy dia manome hery antsika hahatratra olona maro kokoa rehefa mikaroka ireo vaovao mifandraika amin'ny teny fanalahidy, tolotra, vokatra, ary andian-teny. Izany no antony mahatonga ny SEO hitarika ny taham-pahaizana manodidina ny efatra ambin'ny folo isan-jato raha oharina amin'ny taham-pahavitrihana roa isan-jato amin'ny fitaterana tambajotra hafa toy ny mailaka marketing, fanontana printy, ary marketing ara-tsosialy
Ankoatra izany, Alexander Peresunko, manam-pahaizana ambony avy amin'ny Semalt , dia manome toky fa ny SEO dia manampy antsika hanatsara ny fahitana ny tranokalantsika amin'ny valin'ny fikarohana na voajanahary, ary ny fitadiavana fikarohana tsy mifangaro amin'ny karama fikarohana raha samy taktika samy hafa ireo.
Nahoana no zava-dehibe aminao ny SEO?
Raha tsy mifantoka amin'ny fanatsarana ny tranokalanao na blôginao ianao noho ny valin'ny fikarohana, dia ho be ny fahafahanao manary ny fifamoivoizanao ary ny mpanjifa amin'ny mpifaninana dia ho avo kokoa satria ny tranokalan-dry zareo dia hiseho amin'ny ambony motera Ny voka-pifidianana na ny tranokalam-pifandraisan-davitra, raha toa ka misy olona mitady karoka na serivisy manokana amin'ny aterineto, dia mivadika ho Google, Bing na Yahoo. dia asehon'ny mpikaroka fa ny 60 isan-jaton'ny Google traffiques dia mandeha mankany amin'ireo tranonkala sy bilaogy izay miseho amin'ny valiny telo ka efatra.
Ahoana no ahafahan'ireo fitaovana fitadiavana manombana ny toerana misy ny orinasa?
Mampiasa algorithm amin'ny alàlan'ny fitaovam-pitadiavana hanombanana ny toerana misy ny orinasa ary manome torohay fampahalalana mahasoa sy ilaina izy ireo amin'ny algorithm. Tokony ho azonao antoka fa ny tranokalanao dia miseho eo amin'ny pejy voalohany fa tsy ny 20. Amin'izany, tokony hifantoka amin'ny tompon'andraikitra momba ny sehatra ianao ary manoratra lahatsoratra momba ny lohahevitra mifandraika amin'ny raharahanao. Ny fahefan'ny tranonkalanao dia voafaritra amin'ny toe-javatra sasany eo an-toerana sy ivelan'ny toerana. Ny sasany amin'izy ireo dia voafaritra etsy ambany.
Onsite - Ny milina fikarohana dia manome toerana tsara kokoa ho an'ireo tranonkala izay mamoaka tsy tapaka ny votoaty vaovao amin'ny lohahevitra manokana. Raha manana tranokalam-baovao ianao dia tokony mamoaka lahatsoratra tsy tapaka ary mametraka ny fahefana an-tserasera.
Offsite - Ny tadiavin'ny fikarohana dia maniry ireo tranonkala hafa hiverina amin'ny pejy web-nao. Raha misy tranonkala hafa mifandray amin'ny lahatsoratrao sy ny olona mizara ny votoatin'ny tranonkala tambajotra sosialy, dia hanana laharana ambony amin'ny valin'ny fikarohana ianao.
Ahoana no hanombohana ny fikarohana (SEO)?
Haka fotoana be ny fitetezana ny milina fikarohana, saingy tsy maintsy mandoa vola izy rehefa tonga any amin'ny mpitsidika vaovao. Raha nanomboka ny blôginao ianao, dia tsara ny mifantoka amin'ny mpihaino anao. Raha tokony hanoratra mikasika ny lohahevitra ankapobeny ianao dia tokony hamoaka votoaty momba ny lohahevitra manokana sy ny fandrakofana lohahevitra. Ary raha vao manomboka manoratra ny votoatiny voalohany ianao dia hanorina fahefana ho an'ny sehatra misy anao ary tokony hizara ny votoatin'ny media sosialy tsy tapaka Source .